၁၇ ဇူလိုင်၊ ၂၀၂၁
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကန်ဒါဟာပြည်နယ် တောင်ပိုင်းမှာ မနေ့ သောကြာနေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲအတွင်း Pulitzer ပူလစ်ဇာ သတင်းဆု ရရှိထားတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ရိုက်တာသတင်းထောက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ရိုက်တာသတင်းဌာနက ဓါတ်ပုံသတင်းထောက် Danish Seddiqi ဟာ အာဖဂန်အစိုးရတပ်ဖွဲ့နဲ့ တာလီဘန်လက်နက်ကိုင်တွေအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲကို သတင်းယူခဲ့စဉ်မှာ သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာဖဂန်သံအမတ်ကြီး Mamundzay. က Twitterလူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးထားပါတယ်။
ဒါအပြင် အဲဒီသတင်းထောက်ဟာ အာဖဂန်အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ အတူလိုက်ပါ သတင်းယူခဲ့ကြောင်း ၊ ကာဘူးလ်မြို့ကို မသွားရောက်ခင် သီတင်းနှစ်ပတ်လောက်က လူချင်းတွေ့ဆုံခဲ့သေးကြောင်း နဲ့ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အတွက် သူမိသားစုဆီကို ဝမ်းနည်းစကားဆိုပါကြောင်းလည်း ရေးသားထားပါတယ်။
ဒါအပြင် အာဖဂန်သမ္မတAshraf Ghani ကလည်း ရိုက်တာသတင်းထောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းတုံလှုပ်ရပါကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။
အလားတူ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးRoss Wilson ကလည်း ရိုက်တာသတင်းထောက်ရဲ့ မိသားစုဆီကို ဝမ်းနည်းကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို တိုက်ပွဲသတင်း ရိုက်ကူးစဉ်သေဆုံးခဲ့တဲ့ Danish Seddiqi ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မွန်ဘိုင်းမြို့ အခြေစိုက် ရိုက်တာသတင်းထောက်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဖက် ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေရဲ့ သတင်းကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်Pulitzer သတင်းသမားဆု့ကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အာဖဂနျနစ်စတနျနိုငျငံ ကနျဒါဟာပွညျနယျ တောငျပိုငျးမှာ မနေ့ သောကွာနကေ့ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ တိုကျပှဲအတှငျး Pulitzer ပူလဈဇာ သတငျးဆု ရရှိထားတဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံသား ရိုကျတာသတငျးထောကျ သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။
ရိုကျတာသတငျးဌာနက ဓါတျပုံသတငျးထောကျ Danish Seddiqi ဟာ အာဖဂနျအစိုးရတပျဖှဲ့နဲ့ တာလီဘနျလကျနကျကိုငျတှအေကွားဖွဈပှားနတေဲ့ တိုကျပှဲကို သတငျးယူခဲ့စဉျမှာ သဆေုံးခဲ့တာဖွဈတယျလို့ အိန်ဒိယနိုငျငံဆိုငျရာ အာဖဂနျသံအမတျကွီး Mamundzay. က Twitterလူမှုကှနျရကျမှာ ရေးထားပါတယျ။
ဒါအပွငျ အဲဒီသတငျးထောကျဟာ အာဖဂနျအစိုးရတပျဖှဲ့တှနေဲ့ အတူလိုကျပါ သတငျးယူခဲ့ကွောငျး ၊ ကာဘူးလျမွို့ကို မသှားရောကျခငျ သီတငျးနှဈပတျလောကျက လူခငျြးတှဆေုံ့ခဲ့သေးကွောငျး နဲ့ ဒီလိုဖွဈရတဲ့အတှကျ သူမိသားစုဆီကို ဝမျးနညျးစကားဆိုပါကွောငျးလညျး ရေးသားထားပါတယျ။
ဒါအပွငျ အာဖဂနျသမ်မတAshraf Ghani ကလညျး ရိုကျတာသတငျးထောကျသဆေုံးခဲ့တဲ့အတှကျ ဝမျးနညျးတုံလှုပျရပါကွောငျး ပွောဆိုပါတယျ။
အလားတူ အာဖဂနျနစ်စတနျနိုငျငံဆိုငျရာ အမရေိကနျသံအမတျကွီးRoss Wilson ကလညျး ရိုကျတာသတငျးထောကျရဲ့ မိသားစုဆီကို ဝမျးနညျးကွောငျး ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီလို တိုကျပှဲသတငျး ရိုကျကူးစဉျသဆေုံးခဲ့တဲ့ Danish Seddiqi ဟာ အိန်ဒိယနိုငျငံ မှနျဘိုငျးမွို့ အခွစေိုကျ ရိုကျတာသတငျးထောကျဖွဈပွီး ၂၀၁၈ ခုနှဈက မွနျမာနိုငျငံ အနောကျဖကျ ရခိုငျပွညျနယျက ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျတှရေဲ့ သတငျးကို ရိုကျကူးတငျဆကျခဲ့တဲ့အတှကျPulitzer သတငျးသမားဆု့ကို ရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
တရုတ် Hacker တွေ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ လုံခြုံရေးကို ဝင်ရောက်ထောက်လှမ်း